Frenchton: တစ် ဦး ကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ & ဘော်စတွန် Terrier ရောစပ်ပိုင်ရှင်၏လမ်းညွှန် - Breeds
Frenchton: တစ် ဦး ကပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ & ဘော်စတွန် Terrier ရောစပ်ပိုင်ရှင်၏လမ်းညွှန်
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးနှင့် Boston Terrier အကြားချစ်စဖွယ်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသူသည်အများအားဖြင့် Frenchton ဟုလူသိများသောကျန်းမာရေးပြissuesနာများကိုမိဘမျိုးပွားများနှင့်လျှော့ချရန်ကြီးပြင်းခဲ့သည်။
၁၆.၁ ထက်အမြင့်မရပ်နိုင်ခြင်းကိုပြင်သစ်တန်က၎င်း၏ပတ် ၀ န်းကျင်ခေါင်း၊ ပြားချပ်ချပ်မျက်နှာနှင့်နှာခေါင်းမှအလွယ်တကူမှတ်မိနိုင်သည်။
ဒီလုံ့လရှိသူနှင့်အသိဉာဏ်သေးငယ်တဲ့ pooch ပိုင်ဆိုင်ရန်စိတ်ဝင်စားပါသလား ပိုမိုလေ့လာရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ပိုင်ရှင်၏လမ်းညွှန်ကိုဆက်ဖတ်ပါ။
Frenchton ခွေးသတင်းအချက်အလက် & အဖြစ်မှန်စားပွဲပေါ်မှာ
ရည်ရွယ်ချက် ဒီဇိုင်နာခွေး / အဖော်
အရွယ်အစား ၁၄ မှ ၁၆ လက်မ (ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်း)
အလေးချိန် ၁၅ ပေါင်မှ ၂၅ ပေါင် (အထီးများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်လေးလံသည်)
သက်တမ်း 8 မှ 15 နှစ်
အရောင်အမျိုးမျိုး အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊ အညိုရောင်၊
အပူချိန် စိတ်ကျေနပ်မှုရလိုသောဆန္ဒ, သစ္စာစောင့်သိ, လုံ့လရှိသူ, ကစားစရာ, အသိဉာဏ်
နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်း အလယ်အလတ် - နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းမိနစ် ၃၀ မှ ၆၀ အထိ
နေ့စဉ်စားသုံးမှု သူတို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်ပေါ်အခြေခံပြီးနေ့စဉ် ၃၀၀ မှ ၅၀၀ ကယ်လိုရီ
လူသိများသောကျန်းမာရေးပြuesနာများ အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ၊ အဝလွန်ခြင်းနှင့်အလွန်အမင်းရာသီဥတုကိုသည်းမခံနိုင်ခြင်း
ပြင်သစ်ဆိုတာဘာလဲ Breed ခြုံငုံသုံးသပ်ချက်
Boston Terrier မူလအစ
Frenchton အသွင်အပြင်: ကုတ်အင်္ကျီ၊ အရောင်နှင့်ဖြီးလိမ်းပုံ
မည်သည့်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသည့်ခွေးများနည်းတူ Frenchton ခွေးမျိုးစိတ်သည်မသန့်ရှင်းသောအရာမဟုတ်ပါ။
Frenchton သည်သန့်ရှင်းသော French Bulldog နှင့် Boston Terrier အကြားရှိဒီဇိုင်းမျိုးစုံဖြစ်သည်။
အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး အဆိုပါ stateside အမွေအနှစ် ဘော်စတွန်ထရီယာ၏, Frenchton တကယ်တော့ 1990 ရဲ့ US မှာအစပြုခဲ့ပါဘူး။ ဒါဟာသူတို့ကအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဒီဇိုင်နာခွေးတစ်ကောင်အသင်းကအသိအမှတ်ပြုဖောက်ဖြစ်လာခဲ့သည်ကြောင်း 2009 မှမဟုတ်ခဲ့ပေ။
မိဘအုပ်ထိန်းမှုများတွင်တွေ့ရသောသာမန်ကျန်းမာရေးပြissuesနာများ၊ အထူးသဖြင့်ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ (Frenchie) မှအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာရောဂါများကိုရှောင်ရှားရန်၎င်းတို့ကိုမွေးဖွားခဲ့သည်ဟုယုံကြည်ရသည်။
ဤအကြောင်းကြောင့်သူသည်သူ၏ Frenchie မိဘထက်ပိုရှည်သောနှာရည်ကျိုးသည်ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။ ပြင်သစ်နှင့်ဘော်စတွန်တယ်ရီယာတို့၏သစ္စာစောင့်သိမှုနှင့်အတူဒီဇိုင်နာရောနှောခြင်းသည်စူပါအဖော်ဖြစ်လိမ့်မည်ဟူသောအချက်က (ဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ အသေးစိတ်ဖတ်ရှုရန်) စိတ်ထားအပိုင်း ) ။
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးနှင့် Boston Terrier Mix သည် ၈ နှစ်မှ ၁၅ နှစ်အထိသက်တမ်းရှိသည်။
ပုံမှန်အားဖြင့် Frenchie မိဘနှင့်သက်ဆိုင်သော $ 500 - $ 3,500 အကြားစျေးနှုန်းသတ်မှတ်ချက်ကိုမှာကြားသည်။ အမြဲတမ်းသင်၏သုတေသနပြုပါနှင့် တစ် ဦး ဂုဏ်သိက္ခာရှိတဲ့မျိုးဆက်များရှာပါ ။
၁၅-၂၅ ပေါင်ကနေ ၁၄ ပေ ၁၆-၁၆ အကြားရှိတဲ့ခွေးကလေးတစ်ကောင်။
ဤကစားစရာခွေးတစ်ကောင်အတွက်ခွေးတစ်ကောင်လျှင်ဒေါ်လာ ၅၀၀ မှ ၃၅၀၀ ကြားမည်သည့်နေရာတွင်မဆိုပေးဆပ်ရန်မျှော်လင့်သင့်သည်။ စျေးကြီးတဲ့အတွက်ပိုင်ရှင်တွေကတစ်ခါတလေကြည့်ကြတယ် Frenchton ခွေးမွေးစားရန် ။
ပရီမီယံစျေးနှုန်းမှာများသောအားဖြင့်မိခင်ဖရန့်စစ်၏ကျေးဇူးကြောင့်ဖြစ်ပြီးတင်ပါးသေးငယ်သောကြောင့်မျိုးပွားရန်အထူးသဖြင့်ခက်ခဲသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများသည်များသောအားဖြင့်မျိုးပွားခြင်းနှင့်သဘာဝမွေးဖွားခြင်းသည်ခွေးပေါက်စများမှတစ်ဆင့် Caesarian အပိုင်းမှမွေးဖွားသည်။ ဤရွေ့ကားလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအားလုံးကုန်ကျစရိတ်နှင့်အတူလာနှင့်အမှိုက်သရိုက်များမကြာခဏသေးငယ်တဲ့အရာသည်နောက်တဖန်တစ် ဦး ခွေးကလေး၏စျေးနှုန်းတွန်း။
ဗြိတိန်မှစတင် , ပြင်သစ်ခွေးဘီလူးများ Nottingham အတွက်ဇာထုတ်လုပ်သူနှင့်အတူမျက်နှာသာတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ စက်မှုတော်လှန်ရေးကာလအတွင်းဇာလုပ်ငန်းကိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူများစွာသည်ပြင်သစ်နိုင်ငံသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီးသူတို့၏ခွေးများကိုသူတို့နှင့်အတူခေါ်သွားကြသည်။ အဆိုပါဆက်မကြာခဏ terrier နှင့်အတူကူးခံရလျက်ရှိသည် နှင့် pugs အဆိုပါရှာဖွေတွေ့ရှိခံရမီ, လမ်းတစ်လျှောက် Parisian မင်းသမီး ။ ပြင်သစ်သားများသည်မြို့ငယ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းနှင့်အညီအရွယ်အစားသေးငယ်ပြီးကြည်ညိုလေးစားကြပြီးမကြာမီတွင်သူတို့သည်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုရှိရေကိုဖြတ်ကျော်လာကြသည်။
ချစ်တယ် သူတို့ရဲ့ချစ်ခင်သဘာဝ , Frenchies လွယ်ကူသွား, လူပေါင်းကောင်းသောနှင့်အားကစားဖြစ်ကြသည်။ သူတို့သည်မည်သည့်မိသားစုနှင့်မဆိုအဆင်ပြေစွာ၊ ကလေးငယ်များနှင့်စူပါမားကတ်များဖြစ်ကြပြီးငယ်ရွယ်သောအရွယ်မှ စ၍ အခြားအိမ်မွေးတိရိစ္ဆာန်များကိုအထူးသဖြင့်သည်းခံတတ်ကြသည်။
ခွေးဘီလူးနှင့် Terrier အကြားကူး တရားသူကြီးအမည်ရှိခွေးဖြစ်ခဲ့သည် ။
Brit များကိုချစ်သောသွေးအားကစားကြောင့်ကျေးဇူးတင်ပါသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့၌ Boston Terrier ရှိသည်။
1800 ပြည့်လွန်နှစ်များတွင်တရားသူကြီး, ပထမ ဦး ဆုံးဘော်စတွန် Terrier, ဝီလျံ O'Brien နှင့်အတူ stateside သူ၏လမ်းတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ တရားသူကြီးမှာမူမူလဘော်စတွန်တယ်ရီယာဖြစ်သည်။ တစ်မြို့အပြီးအမည်ရှိသောဘော်စတွန်ထရီယာရှင်သန်နေရာအရပ်ပါပဲ။
ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးနှင့်စိတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်အဝ, ဒီအသိဉာဏ်နည်းနည်းကောင်လေးသည်သူ၏လူမျိုးနှင့်အတူဖြစ်ခြင်းရုံပျော်ရွှင်သည်။ နောက်ထပ်အစိုင်အခဲအားလုံးပတ် ၀ န်းကျင်ကဘော်စတွန် Terrier ကို Frenchie နှင့်ကျွန်ုပ်တို့ဖြတ်ကျော်သောအခါတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ထိုကဲ့သို့သောလူများနှင့်သက်ဆိုင်သော၊
ဒါ လူပေါင်းကောင်းသောနည်းနည်းကောင်လေး အများဆုံးမိသားစုများနှင့်ကိုက်ညီသည်။ သူတို့သည်ကလေးတွေ၊ စုံတွဲများ၊ တစ်ကိုယ်ရေဘဝများနှင့်ရှင်သန်ကြီးထွားကြပြီးလေ့ကျင့်ခန်းနည်းပါးခြင်းကြောင့်သူတို့သည်ပင်ကိုစရိုက်အနည်းငယ်နှင့်ခွေးတစ်ကောင်ကိုလိုချင်သောအငြိမ်းစားများအတွက်လည်းပြီးပြည့်စုံကြသည်။
ဟောင်ဘို့မသိ, ဤယောက်ျားတွေတကယ်တိုက်ခန်းလူနေမှုအဘို့အပြီးပြည့်စုံသောဖြစ်ကြသည်။ သင့်မှာခွေးတစ်ကောင်ရှိတယ်ဆိုတာကိုအိမ်နီးချင်းတွေကအနိုင်နိုင်သိကြလိမ့်မယ်။ သူတို့ထံမှသင်ကြားရသောအရှိဆုံးဆူညံသံမှာသူတို့အိပ်နေသောအချိန်ဖြစ်သည်။ သူတို့ကကျယ်လောင်စွာဟောက်!
သူတို့ရဲ့ခွေးဘီလူးများနှင့်ကြောက်စရာအမွေအနှစ်များကြောင့်၊ ဒီလူတွေဟာတော်တော်လေးစွမ်းအင်ပြည့်ဝတယ်၊ ဒါပေမဲ့သူတို့မှာတိတ်ဆိတ်တဲ့အချိန်လည်းရှိတယ်။ ပိတ်ပင်တားဆီးမှုန်းကျင်တစ် ဦး ကလမ်းလျှောက်နှင့်အချို့သောလေ့ကျင့်ရေးအစည်းအဝေးများ; သင့်ရဲ့ Frenchton ဆိုဖာပေါ်ကောက်လိမ့်မည်။
သူတို့ဟာအမှန်အတိုင်းပြောရရင်သစ္စာစောင့်သိဆုံးခွေးတစ်ကောင်ပါ။ ဤအရာကိုသူတို့၏ဉာဏ်ရည်နှင့်ကလေးများလုပ်နိုင်သည် သူတို့ကိုလှည့်ကွက်တစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုသင်ပေးပါ ။
လူငယ်တစ် ဦး သည်အသက်ထံမှလူမှုရေးသောအခါ, Frenchton အိမ်၌အခြားအိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်များသည်းခံ - ရုံသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးရဲ့အမွေအနှစ်သတိရဖြစ်။ , တချို့ကသူတို့မသိသောခွေးနှင့် snappy ရနိုင်သည်။
လူတွေကိုသူတို့ရဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာကသူတို့ဟာကာလရှည်ကြာစွာတစ်ယောက်တည်းကျန်ရစ်ခြင်းကိုသည်းမခံကြဘူးလို့ဆိုလိုသည်။ သူတို့သည်စိတ်သောကရောက်ပြီးအဖျက်များဖြစ်လာနိုင်သည်။ သင်သူ့ကိုအိမ်သို့တစ်ယောက်တည်းထားခဲ့ဖို့လိုအပ်မယ်ဆိုတာသိလျှင်ဂုဏ်သတင်းကျော်ကြားသောဒေသခံခွေးကောင်လမ်းလျှောက်သူတစ် ဦး ကိုကြည့်ရှုပါ။
တစ် ဦး က lay- နောက်ကျောကလူနှစ်သက်သော? အောက်ဖော်ပြပါကျွန်ုပ်တို့၏စောင့်ရှောက်မှုလမ်းညွှန်တွင်သူအားစောင့်ရှောက်ရန်ဘာလိုအပ်သည်ကိုအသေးစိတ်ကြည့်ကြစို့။
ပြင်သစ်ခွေးဘီလူး (ဘယ်) နှင့် Boston Terrier (ညာ) သည်အရွယ်အစား၊ အသွင်အပြင်နှင့်ဂရုစိုက်မှုတို့နှင့်ဆင်တူသည်။
ပျမ်းမျှအားဖြင့်သင်၏ Frenchton သည်တစ်နေ့လျှင်ကိုယ်အလေးချိန်တစ်ပေါင်လျှင် ၂၀ ကယ်လိုရီကိုစားလိမ့်မည်။ သူက 18 ပေါင်မှာအလေးချိန်ရဲ့လျှင်ဒီတော့သင်တစ်နေ့လျှင် 360 ကယ်လိုရီန်းကျင်ကျွေးမွေးပါလိမ့်မယ်။
ဤသည်အများအားဖြင့်တစ် ဦး ထံမှလာသင့်ပါတယ် အရည်အသွေးမြင့်အစားအစာ သူ၏နေ့စဉ်အဆီနှင့်ပရိုတင်းလိုအပ်ချက်များကိုလည်းဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
ပရိုတိန်းသည်ဆဲလ်လုပ်ငန်းနှင့်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာများကိုပြုပြင်ရန်နှင့်အဆီသည်စွမ်းအင်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။ ဒီအပျြောကလေးလေးများအတွက်ဆက်ဆက်အရေးကြီးသောဖြစ်၏ သူကပရိုတိန်းကအနည်းဆုံး ၁၈% ဝန်းကျင်နဲ့အဆီက ၅% လိုအပ်တယ်။
ဤခွေးဖြစ်ကြ၏ အဝလွန်ခြင်းမှကျရောက်နေတဲ့ ဒါကြောင့်သူတို့ဘယ်လောက်စားသုံး၊ သငျသညျမုန်နှင့်လေ့ကျင့်ရေးတို့အတွက်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ရန်သူ၏ထမင်းစားချိန်ထောက်ပံ့ကြေးအချို့ကိုလဲလှယ်နိုင်သည်။
သင်၏ရောနှောခြင်းကိုအသုံးပြုသည့်အခါ၊ အချို့သောပြင်သစ်လူမျိုးများသည်အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများကိုသတိရပါ။ မည်သည့်အတွက်မဆိုစောင့်ကြည့်ပါ အသက်ရှူခက်ခဲခြင်း အခါလမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်နွေးရဲ့အခါက overdo ကြဘူး။ Brachy မျိုးဆက်များ သူတို့ကိုယ်သူတို့အအေးဖို့ရုန်းကန် ပူပြင်းတဲ့ရာသီဥတု၌တည်၏။
သူတို့ရဲ့ခင်မင်ရင်းနှီးတဲ့သဘောသဘာဝကသူတို့ကိုမေးမြန်းလိုစိတ်ရှိခြင်းကိုဆိုလိုသည်။ သူတို့သည် Frenchie မိဘထံမှခေါင်းမာသောအချို့ကိုထိန်းသိမ်းထားနိုင်ပြီးတစ်စုံတစ် ဦး သို့မဟုတ်တစ်စုံတစ်ရာသည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းပါကသင့်အားလျစ်လျူရှုရန်ရွေးချယ်နိုင်သည်။
ငါတို့ပြောခဲ့သလိုပဲ Frenchtons အားလုံးသည် brachy breeds ကဲ့သို့ပင်ပူနွေးသောရာသီဥတုတွင်ရုန်းကန်နေကြသည်။ သူတို့ကအအေးကိုအထူးသဖြင့်သည်းမခံနိုင်ကြဘူး။ သူတို့ရဲ့တိုတောင်းတဲ့အင်္ကျီကသူတို့အအေးမိတာကိုဆိုလိုတယ်။ လမ်းလျှောက်ထွက်တဲ့အခါသူတို့ကဆွယ်တာတစ်ထည်လှုပ်နေတာကိုမကြာခဏတွေ့ရလိမ့်မယ်။
ရာသီဥတုအလွန်အမင်းမတတ်သာခြင်းကြောင့်သင်တို့လမ်းလျှောက်ခြင်းနှင့်အိမ်တွင်းနေခြင်း၊ အပူပေးခြင်း (သို့) လေအေးခြင်းများရှိနိုင်သည်။ ဒါပေမယ့်စိတ်မပူပါနဲ့ - သူတို့ရဲ့ဉာဏ်ရည်ကသူတို့ကိုဉာဏ်ရည်ဉာဏ်စမ်းကစားနည်းအတွက်စူပါကိုယ်စားလှယ်လောင်းများဖြစ်စေသည်။
ခွေးများကဲ့သို့ပင်သူတို့သည်အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်ခြင်းနှင့်ဆုလာဘ်အခြေပြုလေ့ကျင့်မှုများကိုအကောင်းဆုံးတုံ့ပြန်ကြသည်။ ခွေးများကတစ်ဆင့်လေ့လာသင်ယူသည် operant အေးစက် - အကယ်၍ ၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်စေပါကအပြုအမူတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားနိုင်ပြီး၎င်းသည်အနှုတ်လက္ခဏာဆောင်သောအကျိုးဆက်များဖြစ်ပေါ်လာပါကအပြုအမူတစ်ခုကိုရှောင်ရှားရန်ပိုများသည်။
ကလေးများကဲ့သို့ပင်သူသည်လိုချင်သောအပြုအမူကိုပြသသောအခါသူ့ကိုချီးမွမ်းပါ။ မလိုချင်တဲ့အပြုအမူလား။ လိုအပ်ပါကသူ၏အပြုအမူကိုလျစ်လျူရှုသို့မဟုတ်ပြန်လည်ညွှန်ကြားပါ။ ပိုကောင်းသောအပြုအမူကိုပြုလုပ်ရန်သူ့ကိုတောင်းဆိုပါ။ ဆုတစ်ခုသည်ချီးမွမ်းခြင်း၊ အာရုံစိုက်ခြင်း၊ ကစားခြင်းသို့မဟုတ်အစားအစာဖြစ်နိုင်သည်။
Frenchtons များသည်တစ်ခါတစ်ရံသူတို့၏ Frenchie မိဘများထံမှခေါင်းမာသောအပိုင်းအစများကိုအမွေခံရနိုင်သည်၊ ထို့ကြောင့်လေ့ကျင့်မှုသည်အနည်းငယ်သောဇွဲရှိရန်လိုအပ်သည်။ သို့သော်ယေဘူယျအားဖြင့်သူတို့၏စိတ်ကျေနပ်မှုသည်ကလေးများအားလှည့်စားရန်သင်ကြားလိုသောအခါ၎င်းတို့သည်ထူးကဲသည်ကိုဆိုလိုသည်။
သင်“ လှိမ့်သွားသည်” ဟူသောသင်ကြားခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။
တစ်ခုမှာသင်၏ Frenchton အဆိုပါသိတယ် command ကိုဆင်း -“ အိပ်” ရန်သူ့ကိုပြောပါ။
သူသည်အပျော်တမ်းအားအလျင်အမြန်လိုက်နာသည်နှင့်တပြိုင်နက်အမူအကျင့်ကိုတံဆိပ်ကပ်ရန်“ ကူးပါ” ဟူသော command ကိုထည့်ပါ။
အချို့သည် Frenchton ၏မိဘများကြောင့်ကလေးများနှင့်အတူ Frenchton ခွေးများကိုသတိထားကြသည်။ ငယ်ရွယ်စဉ်ကတည်းကပေါင်းသင်းခြင်းကိုခံရသောအခါ Frenchtons သည်မိသားစု ၀ င်ဖြစ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ ခွေးကလေးဘဝမှလုံခြုံစိတ်ချရသောနည်းဖြင့်ကမ္ဘာကြီးကိုကမ်းလှမ်းထားသောအရာများနှင့်မိတ်ဆက်ပေးဖို့လိုသည်။
ခွေးများသည်အဘယ်အရာကိုကြောက်ရွံ့ရမည်၊ တစ်ခုခုလုံခြုံမှုရှိကြောင်းသိရန်အပြုသဘောဆောင်သောအတွေ့အကြုံများလိုအပ်သည်။ ကြည့်ပါ ဒီလူမှုရေးစစ်ဆေးရမည့်စာရင်း သင်စတင်ရန်။
အသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြissuesနာများ - brachycephalic မျိုးပွားမှုဖြစ်သောကြောင့် Frenchton သည် Brachycephalic Airway Syndrome ရောဂါခံစားနေရသည်ဟုလူသိများသည်။ ဤသည် stenotic နာကျင်ခြင်း, elongated ပျော့အာခေါင်, hypoplastic trachea နှင့် everted laryngeal saccules အပါအဝင်ပုံမှန်မဟုတ်သောအကွာအဝေးများအတွက်ထီးအသုံးအနှုန်းဖြစ်ပါတယ်။ တစ် ဦး က brachy ဖောက်ဤအရာအလုံးစုံသို့မဟုတ်အားလုံးနှင့်အတူခံရလိမ့်မည်။ အတိုချုပ်ပြောရလျှင်၊ သူတို့သည်အသက်ရှူရခက်ခဲစေပါသည်။
အဝလွန်ခြင်း - သူတို့ရဲ့ Frenchie မိဘလိုပဲအဝလွန်တာအရမ်းလွယ်တယ်။ အဝလွန်ခြင်းသည်ခန္ဓာကိုယ်၏ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများ၊ အရိုးများနှင့်အဆစ်များနှင့်နောက်ဆုံးတွင်ခွေး၏သက်တမ်းကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသောကျန်းမာရေးအခြေအနေများစွာကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းသင်၏ခွေးသည်နေ့စဉ်လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ရန်သေချာသကဲ့သို့အစားအစာစားသုံးမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းသည်အဓိကကျသည်
အလွန်အမင်းရာသီဥတုဒဏ်ကိုမခံနိုင်ခြင်း - ၎င်းတို့၏ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွဲ့စည်းပုံနှင့်အင်္ကျီတိုကြောင့်ပြင်သစ်သားများသည်ပူပြင်းသည့်ရာသီဥတုနှစ်မျိုးလုံးတွင်ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေကြရသည်။ သူတို့ရဲ့ brachy ဖွဲ့စည်းပုံကသူတို့နေမကောင်းအပူမှာသူတို့ကိုယ်သူတို့အအေးခံဖို့တပ်ဆင်ထားကြသည်နှင့်၎င်းတို့၏တိုတောင်းသောကုတ်အင်္ကျီသူတို့ကိုအအေးအများကြီး insulator တွင်လည်းမပေးပါဘူးဆိုလိုသည်။ အလယ်အလတ်ရာသီဥတုသည်အကောင်းဆုံးသို့မဟုတ်လိုအပ်သောအခါ၎င်းဒြပ်စင်မှပုန်းကွယ်ရာနေရာဖြစ်သည်။
Frenchton ခွေးသည် ၁၄ မှ ၁၆ လက်မအရွယ်ရှိခွေးငယ်လေးများဖြစ်ပြီးအလေးချိန် ၁၅ ပေါင်မှ ၂၅ ပေါင်အထိရှိသည်။
ဖရန့်ကန့်များသည်များသောအားဖြင့် Frenchie ထက်နှာခေါင်းသွေးယိုခြင်းကိုသတိပြုမိကြသော်လည်း၎င်းသည်လင်းနို့များရှိသည်။
သူတို့ဟာ Boston Terrier ဆီမှမျက်လုံးပြူးသွားတာပါ။ ဆိုလိုတာကမျက်စိပြissuesနာကပြproblemနာနည်းတယ်။
နှာခေါင်းနှင့်နားရွက်တပ်ဆင်ထားသည့်အခေါင်းပါသောပြားချပ်ချပ်သည်ပြင်သစ်တန်သည်အရောင်အမျိုးမျိုးဖြင့်လာသည်။ သူတို့ကိုအနက်ရောင်၊ ဆံပင်ဖြူ၊ အနက်ရောင်နှင့်အဖြူရောင်၊ အညိုရောင်၊ ခရင်မ်နှင့်ရွှေရောင်တို့ကိုသင်သတိပြုမိလိမ့်မည်။
ဒီခွေးမှာမကြာခဏသွန်းလောင်းပေးသောတောက်ပသောကုတ်အင်္ကျီတိုရှိတယ်။ ဖြီးလိမ်းခြင်းသည်လွယ်ကူသောအလုပ်ဖြစ်သည် တစ်ပါတ်တစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်နှစ်ကြိမ်အဆင်ပြေစေသည့် mitt သည်ဆံပင်အသေကောင်များကိုဖယ်ရှားပေးပြီး၎င်းချည်မျှင်အင်္ကျီကိုထွန်းလင်းစေလိမ့်မည်။ သူတို့သည်လည်းရေချိုးရန်လုံလောက်သောသေးငယ်သည်၊ အချို့သောခွေးခေါင်းလျှော်ရည်နှင့်အတူ သူတို့တစ်တွေ spruce တက်နှင့်အတူလုပ်နိုင်လျှင်။
နားများစိုက်ထူ။ သူတို့သည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ အနည်းဆုံးအပတ်တိုင်းဘက်တီးရီးယားပိုးမွှားတိုက်ဖျက်နိုင်သည့်ဆေးပါသောချည်များကသူတို့ကိုကျန်းမာစေမည်။ အဲ့ဒီခွေးကလေးရဲ့မျက်လုံးတွေကိုသန့်ရှင်းအောင်နူးညံ့သိမ်မွေ့တဲ့မျက်လုံးသန့်သန့်ကိုသုံးပါ။ အထူးသဖြင့်ကျယ်ပြန့်မျက်စိရှိခြင်းမရှိသော်လည်း မျက်ရည်စွန်း အဆိုပါနှုတ်ခမ်းနီ၏တွန့်အတွက်ခြောက်သွေ့မျက်စိကနေထုတ်ပေးနိုင်သကဲ့သို့ပြissueနာတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ ဤပြissuesနာများသည်ပြaနာတစ်ခုဖြစ်လာပါကသင်၏တိရိစ္ဆာန်ဆရာထံမှအကြံဥာဏ်တောင်းခံပါ။
ပြီးပြည့်စုံသောမြို့သူမြို့သားအဖော်တစ် ဦး အဖြစ်ရပ်တည်သောပြင်သစ်တန်သည်အရွယ်အစား ၁၆ လက်မထက်မကြီးဘဲကစားစရာနှင့်လုံ့လဝီရိယရှိသောစိတ်ထက်သန်မှုပါရှိသည်။
ရာသီဥတုသည်အဆင်မပြေလျှင်အိမ်၌စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုအချို့ပြုလုပ်ပါ။ သူတို့၏စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ထောက်လှမ်းရေးတို့ကသူတို့ကိုစုံလင်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းများကိုဖြစ်စေသည်။ သူတို့ကသူတို့ရဲ့ Frenchie မိဘထံမှခေါင်းမာ Streak ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည့်အလားအလာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီအချို့ဇွဲကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါအချည်းနှီးဖြစ်၏။
အစောပိုင်းလေ့ကျင့်ရေးနှင့်လူမှုရေးနှင့်အတူအထွေထွေ All-rounder; ဖော်ရွေပျြောရှငျ။ ပျြောရှငျမှုရှိသညျ့ Frenchton သည်မိသားစုကိုစံပြဖြည့်စွက်ခြင်းဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါမှတ်ချက်နေရာတွင်သင်၏အတွေ့အကြုံများကိုကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
Great Pyrenees Lab ကချစ်စရာကောင်းသောဝက်ဝံခွေးရောလား။
Jagdterrier: ပြင်းထန်သော Little မုဆိုးကိုသိကျွမ်းပါ
ဂျာမန်သိုးထိန်းသည် husky စျေးနှင့်ရောသည်
ဆံပင်ရှည်ငွေရောင် dapple dachshund